Magaalooyinka Waaweyn iyo Nawaaxigooda waxay ku soo noqdeen heerka cudurka oo hooseeya, oo ah wajiga dardargelinta | City of Helsinki
Magaalooyinka Waaweyn iyo Nawaaxigooda waxay ku soo noqdeen heerka cudurka oo hooseeya, oo ah wajiga dardargelinta
Kulankoodii Khamiista, 10kii Juun 2021, kooxda iskuxidhka fayraska korona ee Magaalooyinka Waaweyn iyo Nawaaxigooda waxay go'aansadeen in Magaalada Weyn ee Helsinki ay ku laabatay heer hoose ee cudurka, oo ah wajiga dardargelinta. Siyaasaddu waxay ku saleysan tahay xaaladda cudurkaa faafa iyo qiimeynta guud ee la sameeyay. Kooxdu waxay diyaarinaysay go'aanka iyo fulintiisa ficileed ilaa shirkii toddobaadki la soo dhaafay, halkaas oo kooxdu ay rajaynayso in xaaladdu ay u badan tahay inay u gudubto wajiga dardargelinta. Hubin la'aantan waxaa abuuray, arrimo ay ka mid tahay, yaraan ka hoosaysa heerka la filayay ee infekshannada cusub, saameynada heerka infekshinka ee suuragalka ah ee xiridda dugsiyada dhammaadka toddobaadka iyo doorka noocyada kaladuwan ee fayriska ee maareynta cudurka. Hubin la'aanta weli waxay ku saabsan tahay qaab-dhaca xaaladda. Kooxda isku xirka fayraska korona ayaa diyaar u ah inay si dhakhso leh dib ugu naqshadeeyaan arrinta haddii xaaladdu ka sii darto.
Marxaladda dardargelinta ayaa isla markaaba la guda galayaa, markaana, adeegyada ayaa la furi doonaa oo xayiraadaha ayaa la qaadi doonaa laga bilaabo Talaadada, 15 Juun 2021 wixii ka dambeeya, sida hoos u xusan:
Hawlaha tartanka ee la xiriira waxqabadka carruurta iyo dhallinyarada (ee dhashay 2001 iyo wixii kayar) ayaa sidoo kale lagu suurtogelin doonaa xarumaha gudaha ee ay maamusho magaalooyinku ayaa si xaddidan loo furi laga bilaabo 15-ka Juun wixii ka dambeeya. Mabaadii'da amniga caafimaadka ee howlaha firaaqada waa in la ilaaliyaa. Go'aannada Wakaaladda Maamulka Gobolka ee Koonfurta Finland ee ku saabsan tirada ka qaybgalayaasha munaasabadaha dadweynaha waxay khuseysaa daawadayaasha tartamada.
Hawlaha isboorti ee dadka waaweyn ayaa sidoo kale lagu suurtogelin doonaa xarumaha gudaha ee ay maamulaan magaalooyinku iyadoo si xaddidan loo furayo laga bilaabo 15-ka Juun wixii ka dambeeya. Si kastaba, hawlaha isboortiga ee dadka waaweyn ayaa ah kaliya hawlaha dibadda ee suurtagalka ah. Mabaadii'da amniga caafimaadka ee howlaha firaaqada waa in la ilaaliyaa. U hogaansanaanta isla tilmaamaha ayaa sidoo kale lagula talinayaa hawl-wadeenada khaaska ah.
Goobaha adeegga macaamiisha ee degmooyinka waa la furi doonaa, marka laga reebo jiimamka iyo xarumaha isboortiga ee kooxaha. Xarumaha la furayo waxaa ka mid ah qolalka akhriska maktabada, qalabyada loo isticmaalo koox ahaanta iyo goobaha isu adeegidda, iyo sidoo kale waxqabadka iyo goobaha waxbarista ee xarumaha dhaqanka iyo wixii la mid ah. Kirada qolalka shirarka iyo kulanka waxaa lagu suurta galiyay iyadoo la raacayo xayiraadaha dhacdooyinka dadweynaha ee Hay'adda Maamulka Gobolka ee Koonfurta Finland. Xarumaha adeegga macmiilku uma baahna inay mar dambe isticmaalaan xaddidaadda nambarka macaamiisha, laakiin badqabka caafimaadka waa in lagu daryeelaa iyada oo loo marayo nidaamyada gaarka ah ee xarunta.
Kooxda isku xirka fayraska korona waxay sidoo kale ku talineysaa in Wakaalada Maamulka Gobolka ee Koonfurta Finland ay go'aan ka gaarto sida ugu dhaqsiyaha badan si looga dhaafo xaddidaada tirada dadka marka ay jiraan munaasabadaha dadweynaha, si munaasabadaha in ka badan 10 qof ay ugu jiraan gudaha iyo in ka badan 50 qof oo banaanka ah, tilmaamaha OKM / THL 31.5.2021 waa in la raaco sidoo kale waa inay u suurta gashaa kaqeybgalayaasha ama kooxaha inay ilaaliyaan kala-fogaanshaha jireed.
Intaa waxaa dheer, kooxda isku-xirka ee fayraska korona waxay ku talineysaa in Wakaaladda Maamulka Gobolka ee Koonfurta Finland ay go'aan ka gaarto sida ugu dhaqsaha badan si looga dhaafo xayiraadaha ku xusan qodobka 58 d ee Sharciga Cudurrada La-isqaadsiiyo ee khuseeya kala dheeraanshaha waxtarka leh ee badbaadada iyo ka fogaanshaha isu-dhawaanshaha jireed ee macaamiisha, maadaama aan shuruudaha xayiraadaha aan la buuxin.
Munaasabadaha khaaska ah waxaa lagula talinayaa in lagu xadido isla xaaladaha munaasabadaha dadweynaha.
Kooxda isku-xirka fayraska korona waxay xooga saareysaa in cudurku uusan wali dhamaan; taxaddarka iyo dhaqamada amniga caafimaadka waa in la sii wadaa in la raaco, iyo xaddidaadaha qaarkood waa in la sii wadaa in la sii joogteeyo. Xaddidaadda adeegyada ka sii jiri doona aagga ayaa wali lagu dabaqi doonaa waxqabdyada isboortiga la hago ee dadka waaweyn ee ku jira xarumaha gudaha, waxqabadyada madaxbannaan ee jimicsiga iyo goobaha isboortiga ee kooxaha, iyo tartanka dadka waaweyn, howlaha ciyaarta iyo tartanka ee xarumaha gudaha. Intaas waxaa sii dheer, talooyinki hore oo ku saabsanaa shaqada fog (onlaynka) iyo xirashada maaskarha wajiga ayaa weli jiraya. Talooyinka badbaadada caafimaadka waa in la sii wadaa in lagu dhaqmo dhammaan howlaha.
Wakaaladda Hay'adda Maamulka ee Koonfurta Finland ayaa go'aankeeda u gaarka ah u gudbin doonta si gooni ah.
Go'aanka kooxda isku-xirka wuxuu ku saleysan yahay qiimeynta cudurrada faafa iyo tixgelinta guud ee hab-dhaca xaaladda fayraska korona, tilmaamaha si dhaqso ahna waa loo beddeli karaa haddii xaaladdu sidaas u baahan tahay.
Kooxda isku-xirka fayraska korona ee Magaalooyinka Waweyn iyo Nawaaxigooda waxay diyaarisaa go'aan qaadashada maxalliga ah
Magaalooyinka Helsinki, Espoo iyo Vantaa, Machadka Caafimaadka iyo Daryeelka ee Finland, Isbitaalka Degmada Helsinki iyo Uusimaa, iyo Wakaaladda Maamulka Gobolka ee Koonfurta Finland ayaa aasaasay kooxda isku-xirka Magaalooyinka Waaweyn iyo Nawaaxigooda ee fayraska korona markay ahayd 10-ka Sebtember 2020. Iyadoo la raacayo qaab-hawleedka gobolka ee ay soo diyaarisay Wasaaradda Arrimaha Bulshada iyo Caafimaadka ee Finland, kooxdu waxay tiigsanaysaa inay xoojiso sameynta qiimeynta xaalad guud iyo isku-duwidda iyo diyaarinta tallaabooyinka maxalliga ah iyo kuwa gobollada.
Kooxdu waxay ka kooban tahay maamulka sare urur kasta oo xubin ka ah waxayna mas'uul ka tahay diyaarinta iyo isku dubaridka go'aan gaarista iyadoo lagu saleynayo qiimeynta la wadaago ee xaaladda. Xubin kastaa waxay gaartaa go'aan madaxbannaan, iyada oo galaangal u leh awoodda maamulka. Kooxdu waxay sii xoojineysaa wada shaqeynta dhow ee magaalooyinka waaweyn iyo nawaaxigooda ee jiray inta lagu jiray dhibaatadii fayraska korona.
Caasimadda Helsinki ayaa mas'uul ka ah abaabulka howlaha kooxda.
Marka laga soo tago Caasimadaha Helsinki, Espoo iyo Vantaa, Caasimada Kauniainen waxay sidoo kale u hoggaansameysaa xayiraadaha iyo talooyinka kooxda isku-duwidda.